I-Semalt: Konke Okudingeka Ukwazi Ngezivikelo Zokuphepha Ezokuphepha Kwesicelo Sewebhu futhi Izindlela Zokuzigwema
Ukwandiswa kwamaprosesa okubhekiswe kwe-malware kunokuba i-Mac isebenzeuhlelo oludlule lushiya amanothi amaningi ezobuchwepheshe abuza ngezizathu zesimo. Abaningi bathi lokhu kungaba ngenxa yamandlaMac ngenkathi abanye bekubona ngenxa yombalo omkhulu wabasebenzisi be-Windows ngaleyo ndlela okwenza ukuba kube nomsebenzi ovuzayo wabashayeli bewebhu.Ngeshwa, ukuthandwa kwe-Mac kuye nokwanda kwenani lamaTrojans kanye ne-malware ehlobene nekhono lokulimaza.
Igor Gamanenko, iMenenja Yokuphumelela Kwekhasimende i-Semalt ,sigxila esidingeni sokuvikela iziphequluli kuphela kodwa nezinhlelo zokusebenza zewebhu.
Imithombo yamandla okushayela abaculi bewebhu
Uma abasebenzisi bekunika ulwazi lokugcina ku-database yakho, banalindelweukuthi izohlala iyimfihlo. Okungaziwa ukuthi i-website ye-hacker enye indawo igubha kuwebhusayithi yakho ifuna ubuthakathakaamaphuzu okusebenzisa. Noma yikuphi okulandelayo kungakhuthaza izinhloso zabo.
Qinisekisa amandla abo emphakathini.
Yenza ukulahlekelwa yinkampani yakho ngokubhujiswa kwedatha.
Landa ulwazi olubalulekile oluthengiswa emakethe omnyama. Esimweni esinjalo,abashiyi noma yiziphi izinselele futhi baqhubeka belimaza isikhathi eside.
Izizathu zokuthi kungani abahlaseli bewebhu behlose isicelo
1. Ukubaluleka kuyisizathu esiyinhloko. Uma wakhe i-intanethi ephumelelayoindawo, kuzomele kube nezincintisana abazizwa bengaphandle futhi kufanele benze konke okusemandleni ukuze bahlale befanelekile.
2. Izizathu zezombangazwe..Lokhu kuboniswa ngamaqembu anjenge-Anonymous orchestrateokugqugquzela ukuhlasela ohulumeni nezinhlangano zenkolo kufanele benze izitatimende.
3. Abasebenzi abathukuthele ngezinye izikhathi bahlangana nabangaphandle ngenxa yokunganeliseki.
Ukuhlaselwa okuphindaphindiwe okuphindaphindiwe
1. Ukuhlaselwa kwe-SQL Injecting
Kulesi simo, inhloso yokuhlaselwa kwedatha ukutshontsha, ukubhubhisa noma ukuguqulaulwazi lomsebenzisi. Isibonelo, i-hacker ye-website ingalungisa imiphumela yezimali yenkampani futhi iphinde ibambe imininingwane ebalulekile yamakhasimendenjengezinombolo zekhadi lesikweletu.
2. Ukuhlaselwa Kwama-Cross-Site Scripting
Lokhu kuhilela ukufaka ikhodi enonya eyenza ohlangothini lwesisulu.
3. Ukusatshiswa Kwezinsizakalo Zokusekela
Lokhu kuhilela ukuqoqwa kwamakheli e-IP ayizinkulungwane ezihloselwe ukukhukhula isayithi nge-traffic.Lokhu kwenza isayithi ihambe kancane noma ayitholakali isikhathi esithile.
4. Ukuvinjelwa Kwe-Cross Site Isicelo sokuhlaselwa
Umsebenzisi uphonswa ukulanda isixhumanisi noma isithombe phakathi neseshini eqinisekisiwe okusizaekwenzeni ukuhlaselwa okunonya.
Izindlela zokuvikela izimpahla zakho nabasebenzisi
Ngezinhlelo zokusebenza zewebhu ezizungezwe yizo zonke izinselele ezingenhla, akekho unjiniyelaangathanda ukubeka engozini imizamo yakhe. Lokhu kwenza kube yimfuneko ukufaka izinyathelo zokuvimbela kusukela ezigabeni zokuqala ukuya ekugcineni. Abanyeizixazululo zihlelwe emisebenzini ethile kanti ezinye zenziwa ngokuqhubekayo. Ukubuyekeza kwamakhodi, ukuskena kwabo, nezinhlelo zokuzingela izigciwaneKudingeka kwenziwe kuwo wonke umsebenzi wokuphila wesicelo. Uma ufuna izixazululo eziqondene nokuhlaselwa okuzozikhethela ekusebenziseni ukusetshenziswawe-CAPTCHAS, ukusetshenziswa kwezinqubo ezigcinwe ngemingcele yokuzenzekelayo noma ukusetshenziswa kweWeb Application Firewall okuqapha nokuvimbela okungenzekaukuhlaselwa.